esnips ဆိုတာ File Sharing Site တစ်ခုမှန်း အတော်များများ သိထားကြပြီးသားပါ။ ဗီဒီယိုတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ သီချင်းတွေကို Share လုပ်ဖို့ အတွက် အတော်လေး အဆင်ပြေတဲ့ Site တစ်ခုပါပဲ။ အဲဒီထဲမှာ သီချင်း အချို့ကို Direct Download လုပ်လုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်။ အချို့ကို မပေးပါဘူး။
ဒီလိုပုံလေးနဲ့ တွေ့ရတဲ့ သီချင်းတွေကို Download လုပ်လို့ ရပါတယ်။
ဒီလို ပုံလေးတွေနဲ့ သီချင်းတွေ ကျတော့ Download လုပ်လို့ မရပါဘူး။
ကနေ့ အဖြူရောင်သံစဉ် ကနေ UCSY က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ သီချင်းခွေထဲက ကျောင်းတော်သို့ အလွမ်း ဆိုတဲ့ သီချင်းကို လွှင့်သွားတယ်။ ရံဖန်ရံခါလည်း အလျဉ်းသင့်သလို အဲဒီ ခွေထဲက သီချင်းတွေကို အဖြူရောင်သံစဉ်က လွှင့်ပေးတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါက ဆိုရင် သီချင်း တစ်ခွေလုံးကို လွှင့်သွားတာ နားထောင်ရဖူးပါတယ်။
တကယ်က ကျောင်းတော်သို့ အလွမ်း သီချင်းကို esnips မှာ ကိုညီလင်းဆက် တင်ထားတာ အယင်ကတည်းက တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီသီချင်းလေး ပြန် Share ချင်လာတယ်။
Download လုပ်မယ်ဆိုပြီး သွားတော့ ကိုညီလင်းဆက် ရဲ့ Folder ထဲက အခြားသီချင်း တွေက Download လုပ်လို့ ရတယ်။ ကျောင်းတော်သို့ အလွမ်းဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို Download ဆွဲမယ် လုပ်တော့ သူက Player လေးနဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ Download လုပ်လို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ဆိုတော့ ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ ဆိုတဲ့ အတိုင်း နည်းနည်း မွှေနှောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ Link လေး တစ်ခု သွားတွေ့ပါတယ်။
သူက Esnips Download Link Generator လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီစာမျက်နှာမှာ ပါတဲ့ Paste Your URL Here ဆိုတဲ့ အထဲမှာ ကို Download လုပ်ချင်တဲ့ သီချင်းရဲ့ Link လေးကို Copy ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးတော့ Generate ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် နောက် Page တစ်ခုကို Redirect လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီရဲ့ အပေါ်မှာ ဒီပုံမှာ ပြထားသလို Download ဆိုတဲ့ မြှားလေးနဲ့ Click ခေါက် Download လုပ်စရာလေး တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ Download Link လေးကို Click ခေါက် Download လုပ်လိုက်ရုံပါပဲဗျား။
အဲဒီ Download Link Generator ကို သွားချင်ရင်တော့ ဒါလေးကို Click ပါဗျာ။
သူငယ်ချင်းများ လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်လေးတွေ Download ချ အဆင်ပြေ ချောမွေ့နိုင်ကြပါစေဗျာ။
ကျောင်းတော်ကနေ ခွဲခွာပြီး တစ်နေရာစီ ရောက်နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးလည်း ကျောင်းတော်ကို လွမ်းလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။
ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ညနေခင်းတွေ အပေါင်းအသင်းများနဲ့ ပျော်ရွှင်ရင်း
အိမ်ပြန်ကျောင်းဆင်း သီချင်းတွေ ၀ိုင်းဖွဲ့လို့ သီဆိုရင်း
အပြောင်းအလဲများတဲ့ ဒီလောကမှာ မမြဲခြင်း တရားလက်ကိုင်ထား
ကျောင်းကြီးပြီးလို့ နှုတ်ဆက်ကြချိန် တစ်နေရာစီ ငါတို့ ဝေးသွား...
ငါတို့ ကျောင်းတော်ကြီးကို လွမ်းတယ် အပေါင်းအသင်းများလည်း သတိရဆဲ
ငါရဲ့ ချစ်သူလေးကို လွမ်းတယ် ဝေးကြပေမဲ့ သတိရနေဆဲ မေ့ပျောက်လို့ မရပါကွယ်
ခရေတောတန်း ကံ့ကော်ပန်းတွေ ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ အပြုံးများရယ်
အဆောင်မှာ ညဖက် ဂစ်တာတီးမယ် သီချင်းလေးများ လိုက်ဆိုကွယ်
အပေါင်းအသင်းများနဲ့ ကျောင်းသားဘ၀ကို သတိရမိတော့ ကြေကွဲ
မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ စကားလုံးများနဲ့ တစ်နေရာစီ ငါတို့ဝေးသွား...
အပြောင်းအလဲတတ်တဲ့ လောကမှာ မမြဲခြင်း တရားလက်ကိုင်ထား
Filed Under : Download, Internet, Song
My weblog: contentoanimation.com
Here is my webpage; eensm.org
people notice all relating to the powerful means you
present functional guidelines via
contribution from visitors on that situation while my princess has been becoming educatedawhole
the year. You're the one performingadazzling job.
My weblog - pengchat.com
Also visit my blog post: http://pluft.google-scraps.us
my homepage :: http://www.citygays.de/